Ny 26 feb.2018, ny filoha lefitra Sales Lihong Chen dia mitsidika ireo mpiara-miasa maharitra Bromic Group. Ny ezaka dia tokony hatao mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpiara-miombon'antoka, fanampiana ny mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny tsena. Valizy famolavolana Multi Turn; F1960 & F1 ...
Lanonana fanaovan-tsonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika manerantany
Ny 30 Janoary2018 dia natao ny lanonana fanaovan-tsonia ny fiaraha-miasa stratejika manerantany eo amin'ny WandeKai sy ny WatTS. Watts dia mpitondra eran'izao tontolo izao ny vahaolana amin'ny kalitaon'ny rano amin'ny sehatry ny toeram-ponenana, indostrialy, monisipaly ary varotra. WandeKai dia nanorina fifandraisana matanjaka amin'ny fiaraha-miasa amin'i Watts ho ...
Fotoana: 15th hatramin'ny 19 Oktobra, 2019 Booth number: 11.2D35-36E12-13 China Foreign Trade Center dia andrim-panjakana iray eo ambanin'ny Minisiteran'ny Varotra. Hatramin'ny fampirantiana ny China Import and Export (fantatra koa amin'ny hoe Canto ...